Maxaad Ka Taqanaa Nolosha Ka Jirta Kuuriyada Waqooyi? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Cumar Maxamed — September 28, 2020
Hadii aad tahay qof dalxiiska jecel hadaba ogaaw Kuuriyada Waqooyi ma ahan goobta kugu habboon kana saar liiska wadamada kuu qorsheysan inaad booqato, laakiinse haddii aad dooneyso inaad wax kasoo ogaato wajiga dhabta ah ee gumeysiga, Kuuriyada Waqooyi waa goobtaada.
Inta aanan u guda gelin xaqiiqooyinka qarsoon iyo nolol xumida ka jirta Waqooyiga Kuuriya marka hore isweydii waa wadan noocee Kuuriyada Waqooyi?
Waqooyiga Kuuriya waa wadan dhaco bariga eeshiya, xigana waqooyiga marka loo eego wada jirkii Kuuriyada, Biyoonyaang waa caasimada wadankani Kuuriya ahna caasimada ugu weyn dalkaasi, sidoo kale Kuuriyada waqooyi waxaa kunool sida lagu sheegay tirro koobkii u danbeeyay ee lasameeyay labada kun, lix iyo tobankii (2016) tirro dad gaaraya shan iyo labaatan milyan, hadaba wadankan ayaa haysta dhaqaala gaaraya shan iyo labaatan bilyan oo doolarka Mareykanka ah $25 Bilyan.
Wadankani waxa uu dhanka waqooyi iyo waqooyi galbeedba xuduud kala wadaagaa wadamada Shiinaha, Ruushka iyo webiga Tuumin halka dhanka koonfureed uu xuduud aad u xoogan kala leeyahay wadanka ay xurgufta kala dhaxeyso ee “South Korea” ama “Kuuriyada Koonfureed”.
Kahor labadan wadan Koonfurta Kuuriya iyo Waqooyiga Kuuriya inta aysan kala go’in waxaa maamuli jiray boqortooyadii Jabaan, halka dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida markii jab uu soo gaaray Jabaan ee labadaan wadan u kala go’eyn labo qeybood. Qeybta koonfurta Kuuriya waxaa haystay gumeystihii Ameerikaanka halka dhanka waqooyiga Kuuriya uu haystay gumeystihii Midowga Suufiyatka ee Ruushku madaxda ka aheyd.
Hadaba taariikhdaas kooban ee Waqooyiga Kuuriya markii aan ka soo tagno, waa maxay nolosha xun iyo gumeysiga caddaadiska badan ee kaligii taliye Kim-Jong un uu kuhaayo wadankaasi?
Waxaan hal iyo labo kataaban doonnaa xaqiiqooyinka u qarsoon Waqooyiga Kuuriya ee laga yaabo inaadan warba u heynin.
Lama ogolo wax kitaab diimeed ah!
Waqooyiga Kuuriya waxaa u taliya kaligii taliye Kim-Jong-Un ahna mid kamid ah jiilkii seddexaad ee qoyska Kim kuwaasoo wadanka ka talinaayay mudo 83 sanno ah, marka laga soo bilaabo ilaa 1948-dii.
Hadaba dowlada Waqooyiga Kuuriya ayaa leh sharci qofku in uusan caabudi karin wax diin ah, oo aanan la oggaleyn qofku innuu aamino innuu jirro ilaah halka awwooda ilaahnimadu ay ku jirto qoyska Kim ay tahayna in dadku aaminaan awwooda qoyska Kim. Ilmaha caruurta waxaa labaraa magaca Kim-Il-Sung ahna awoowihii Kim-Jung-Un kahor inta aysan baran magaca waalidiintooda ee dhalay, midaasi ayaana sababtay haddii lagguugu arko kitaab diimeed, ha ahaado bible ama kitaabka quraanka kariimka in qofkii lagu qabtaa uu muteesanyo dil.
Qaabka tinta loo jarto oo sharciyeesan!
Waqooyiga Kuuriyada dowlada waxa ay soo saartay labaatan iyo sideed (28) qaab oo la oggalyahay in tinta loo jarto, toban kamida qaababkaas waxaa iska leh raga halka sideed iyo toban ka kale ee leeyihiin dumarka – Haddiise lagguugu helo qaab ka baxsan qaababka dowladu soo saartay waxaad muteesan doontaa xabsi daa’in ah ama dil. Laakiin mida layaabka keeneyso ayaa ah Madaxweyne Kim-Jong-Un qaabka uu u jaranyahay in aysan aheyn qaababka dowladu sharciyeysay uuna asago u jaran karo qaab u gooni ah.
Baabuur gadashadu waa ay xayirantahay!
Gadiidka dadweynaha ay raaci karaan reer Kuuriyada Waqooyi
Kaliya dadka dowlada u shaqeeyo ama VIP-da ayaa loo oggalyahay in ay gaari u gooni gataan oo ay wataan – haddii aad tahay qof riyadiisu tahay inuu baabuur yeesho Waqooyiga Kuuriya taasi kuuma rumeyn doonto, hadaba taasi waxa ay sababtay in bassaska dowlada ay noqdeyn kuwa kaliya ee dadka u raacaan gaadiid ahaan meeshii ay rabaan, waxeyna sababtay arinkaa mid ka dhigtay caadi. Gaadiidku mid mashquul badan oo waqtiga shaqada aad kahabsaameyso sidaa u sugeyso bus ku qaada.
Caasimada inaad degto waa adagtahay!
Qofka muwaadinka sida wadamada caalamka waxa uu kasoo guuri karaa xaafad ka xaafad ama caasimad ka caasimad sida uu qayaarkiisu siiyo, laakiinse Waqooyiga Kuuriya muwaadiniintooda looma ogalo in ay ka guuraan guryahooda, ama qoys degan magaalo ka baxsan caasimada haddii ay doonayaan in ay qoyskaasi kasoo guuraan magaaladooda soona degaan caasimada waa in ay koowdii hore warqad codsi ah u diraan dowlada sababtoo ah caasimada Biyoonyaang looma oggala muwaadin aanan aheyn mid daacad ah ama hormarsan ee taajir ah.
Shabakada TVga waa mid ilaalsan!
Haddii aad aheyd shaqsi ku xiran daawashada musalsalada maalin laha ah waa inaad macsalaameysaa, sababtoo ah Waqooyiga Kuuriya kaliya dhalada waxa ay leedaha seddex kanaal oo ay maamusho dawlada, lagana soo daayo kaliya baro-boggaandooyinka dowlada Kim.
Muuqaalkaan wuxuu muujinayaa nolosha maalmeedka gudaha dalka Waqooyiga Kuuriya. Hay’ada xaquuqda aadanaha uvdoodo ee UN-ka ayaa isku dayday in sharcigaas ay mooshin kakeento laakiin arrintaas waxa ay noqotay mid shaqeyn weyday.
Haddii ay jirto wax aysan dawladda Waqooyiga Kuuriya marba cafis u fidineynin waa dambiile, halka ay soo saareen sharci dambiilaha uusan marnaba kufakan karin xabsiga kaasoo lamagac baxay Sharciga “Dhammaan hal qof, iyo hal qof dhammaan” waa sharci uu ansixiyay kaligii taliye Kim-Jung-Un kaasoo ah, haddii shaqsi dambiila ah uu kafakado xabsiga, waxaa xarrig iyo dilba mudan doono dhammaan qoyskiisa illaa jiilkooda udambeeyo sidaa haddii uu noolyahay awoowihiis, awoowihiisa iyo wixii ka danbeeyaba waa xarig. Hay’ada xaquuqda aadanaha uvdoodo ee UN-ka ayaa isku dayday in sharcigaas ay mooshin kakeento laakiin arrintaas waxa ay noqotay mid shaqeyn weyday.
Wacitaanka dibada waa Mamnuuc!
Dowlada Kuuriyada Waqooyi waa mid maamusha dhammaan qadka dalka kaasoo base station control-ku ay dawladu gacanta ku hayso, ayna dhageysato coddadka taleefoonka marka qofku uu ku hadlayo. Waxa ayna la socdaan dhaqdhaqaaq walbe ee shaqsiga kunool dalka. Sanadii 2012-kii booliska Waqooyiga Kuuriya ayaa toogasho ku dilay shaqsi wacitaan dibada sameeyay asagoo ku dhex jirra garoon ku yaalo caasimada taasoo furtay argagax iyo layaab, haddaba qofkii lagu qabtaa ama laga war helaa inuu wacay lambar dibada ah, ha ahaado qoyskiis waxa uu muteysan doonaa dil toogasho aanan ka noqod laheyn.
Wax fikrad ah madhiiban kartid!
Waqooyiga Kuuriga ma aaminsanno wax la dhaho xuriyatul qowlka ama dimuqraadiyada, haddii uu muwaadinka Waqooyiga Kuuriya aragti cusub uusan ubogin ay dowlada soo saarto, wax fikir ah kama dhiiban karo, ama waa inuu qaabkaasi raacaa ama waxa uu muteysan doonaa xabsi dhaqan celis ah kaasoo lagu bari doono innuusan mar danbe dawlada kusoo afcelinin.
Wadanka lagama bixi karo!
Muwaadinka Waqooyiga Kuuriya ahi ma haysto qayaar uu ku aado dalxiis ama uu kaga baxo dalka, waa uu joogi dalka ilaa uu kaga dhinto dalkiisa – hadduu isku dayana in si qarsoodi ah uu kaga baxo dalka in ay u suurto gasho aad bay u adagtahay sababtoo ah dhammaan xuudaha waa ay ilaalsan yihiin waliba si aan innaba caadi aheyn, garoonka diyaaradahana warkiisa haba sheegin.
Tags: Kuuriyada Waqooyi iyo Kim Jung Un
Next post Fahanka Ganacsiga Islaamiga ah
Previous post Isu-dhigan: Xaalad Aan Caadi Ahayn - Xal aan caadi ahayn